Zuva: Kukadzi 8, 2020
Izmir Metropolitan Municipality Meya Soyer akasaina chibvumirano chekunze chemari inosvika makumi mashanu emamiriyoni eEuro paFahrettin Altay - Narlıdere Light Rail System Line Project. Zvinoenderana nenhau dzaMehmet İşler kubva kuEgedesonsoz.com; "Izmir Metropolitan [More ...]
PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu akavhura CNR 7th International Book Fair. Mukutaura kwake kwekuvhura, akati, "Pane zvimwe zvinhu zvinozotiendesa kune imwe nzvimbo munyika. Kunyanya kufarira mubhuku kana munyika [More ...]
Vachitungamirirwa neManyisa Metropolitan Municipality Transportation department, Metropolitan Municipality, mabhazi ezvekufambiswa neveruzhinji anotakura zvifambiso zvevatakuri pakati pematunhu zvinowanzoita kuti kufambisa kuve kwakachengeteka, nepo vafambi vanofamba vachifumurwa. [More ...]
Bazi rezvekutakurwa nezvivakwa rakazivisa kuti vanhu vanosvika zviuru makumi manomwe nenomwe vakafa mutsaona dzechitima pakati pa2002 na2019. Sekureva kwaDiken, CHP Istanbul MP ​​Sezgin Tanrıkulu nhamba yekufa uye tsaona mbiri dzechitima. [More ...]
Iyo vhezheni itsva yeGreat Istanbul Bus terminal, iyo yakatorwa neIstanbul Metropolitan Municipality, yakawana kufarirwa kwevose vari vaviri vatengesi uye vagari. Istanbul Metropolitan Municipality, mushure mekutora chiteshi chebhazi, yakatanga iyo "yepakati yekubhadhara system" uye [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) iri kuwedzera metrobus, yave iri chikamu chakakosha chehupenyu hweIstanbulites, uye iri nyaya yejeki nemapara nekuda kwehurefu uye hupamhi hwetsetse. IMM, iyo yakurumidzira chirongwa chekumutsiridza nhepfenyuro nehupamhi hwepamusoro, [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality Mutevedzeri woMunyori Mukuru Wezvekufambisa İbrahim Orhan Demir akati izvo zvidzidzo zvepfungwa zvinoitirwa vatyairi vese kuitira kuti vafambise tsaona pamutsetse we metrobus. Iron. "7/24 [More ...]
Pamutsetse we metrobus, unotakura vanhu vangangosvika miriyoni imwe chete pakati pemakondinendi zuva rega rega, mota dzinozovandudzwa nemabhazi ane huwandu hwakakwira. Marmaray inonyanya kushanda kuti iwane hupamhi hwetsetse iyo nzvimbo yekuwedzera inoshanda inowedzera. [More ...]
Kunyangwe Istanbul Metropolitan Municipality yanga iri pachirongwa kwemakore mazhinji, yabvisa basa rekuvaka metro panzira metrobus, iyo isingakwanise kusevenzesa neimwe nzira. Zviuru makumi manomwe zvevatakuri munzira imwechete paawa senge mune Subway ine rabara vhiri kutakura [More ...]
Vanopfuura mamirioni maviri vagari veIstanbul vanoshandisa metro mitero zuva rega rega. Metro inopa kufambisa kwakanaka uye kwakachengeteka; zvisinei, idzi dura dzinobuda semugumisiro wekushanda kwenguva refu uye kwakaomarara. Subway vashandi, Bhizinesi [More ...]